Longsliv के हो र के लगाउन?
के longsliv थाहा नगर्ने ती धेरै गुमाए। आखिर, यो कुरा सबै भन्दा सुविधाजनक को छ। यो लामो बाहुला शर्ट, धेरै राम्रो र नरम जर्सी बनेको छ जो। यस्तो कुरा यो छोटकरीमा वा जिन्स संग, तर प्यान्ट संग मात्र होइन संयुक्त सकिन्छ, विश्वव्यापी छ। साथै, यो एक monochromatic कम प्रमुख र flashy प्रिंट संग या त हुन सक्छ। अझै पनि एक स्वेटर र एक टी-शर्ट मा तातो राम्रो सुन्दर छ जब एक टी-शर्ट longsliv रूपमा यस्तो कुरा एक समयमा अपरिहार्य छ।
धेरै हामी अघि थाहा छैन के longsliv गर्नुभयो तर्क हुन सक्छ। तथापि, यो कुरा मिड-बीसौँ शताब्दीका देखि ज्ञात गरिएको छ कि टिप्पण लायक छ। पहिले, यी टी-शर्ट मात्र नाभिकहरु र सैनिकहरु थिए। तिनीहरूले अंडरवियर को भूमिका खेलेका। तर आज, यो कुरा वर्षको कुनै पनि समयमा धेरै लोकप्रिय छ र कुनै पनि व्यक्ति को दराज हुनुपर्छ। यी कुराहरू तिनीहरूले एकदम राम्रो र सहज छन्, किनभने पुरुष र महिला दुवै बीच लोकप्रिय अब।
longsliv के हो?
वास्तवमा longslivom साधारण जम्पर, पातलो कपडा बनेको छ जो भनिन्छ। यो कृत्रिम वा प्राकृतिक या त हुन सक्छ। तिनीहरूले युवा वस्त्र मानिन्छ भन्ने तथ्यलाई वास्तवमा छैन मामला छ। साँच्चै, एकदम अक्सर तिनीहरूले उन्नत उमेर को मान्छे मा देख्न सकिन्छ। सामान्यतया, यस्तो कट-बाहिर टी-शर्ट राउन्ड, र आस्तीन एकदम साँघुरो छन्। आज, डिजाइनर कल्पना कुनै सीमा थाह छ र contrasting युरोप र अमेरिका मा धेरै लोकप्रिय छन् जो, अक्सर पर्याप्त आस्तीन देख्न सकिन्छ। अक्सर कपडा ट्रिम र घाँटी contrasting। एकदम अक्सर तपाईं पोलो कलर, एक हुड वा longsliv सजाउनु केही अन्य विवरणहरू हेर्न सक्छन्। तसर्थ, अक्सर तिनीहरूले दराज को एक अलग रूपमा थकित छन्।
मोडेल को एक किसिम
longsliv मोडेलहरू बुझ्नुपर्छ के निर्णय। र तिनीहरूलाई त्यहाँ धेरै छन्। महिला लागि विकल्प अक्सर कार्टून वर्ण, संगीत, वा चलचित्र तारा चित्रण गरिएको युवा मोडेल मा मोती वा sequins संग छोट्याउन छन्। यस्तो लुगा सधैं अद्वितीय गर्न सकिन्छ। सिर्फ एक नियमित longsliv किन्न र यो मा माहिर जो स्टूडियो, आफ्नो मनपर्ने तस्वीर उहाँलाई राखे। यस्तो कुरा घर र खेल, ostromodnyh र क्लासिक हुन सक्छ। बालिका लागि मोडेल सामान्यतया केही सजावट संग गरिन्छ र longsliv पुरुष सामान्यतया एकदम कम प्रमुख मुद्रण छ।
सुविधा र व्यावहारिकता
एकदम अक्सर, लामो आस्तीन संग शर्ट तिनीहरूले धेरै सहज र आन्दोलनहरु fetter छैन किनभने चयन गरिएका छन्। आफ्नो मुख्य लाभ को एक उनि एकदम न्यानो हुन् भनेर छ, तर एकै समयमा प्रकाश मा। जवान मानिसहरू तिनीहरू सरल र सार्वभौमिक किनभने longslivy लगाउने रुचि हो, र पुरानो मान्छे घरेलु वा घर लगाउन तिनीहरूलाई पठाइएका छन्। यस्तो कुरा यो बस हटाउन र राख्न मा, र बिल्कुल कुनै पनि लुगा संग संयोजन, सफा गर्न धेरै सजिलो छ। थाह धेरै बस अरू केही गर्न यसलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ के कम्तिमा एक पटक longsliv, छैन। त्यहाँ उहाँले कार्यकर्ता, pupils, विद्यार्थी, sportsmen, शिकारी र अरूलाई लगाउन खुसी थियो भन्ने तथ्यलाई मा अनौठो केही छ। मोडेल को एक किसिम सबैलाई आफु को लागि कुरा टिप्न अनुमति दिन्छ।
के बाट छोटो प्यान्ट लगाउन?
स्त्री र मोहक - मोटे महिलाहरु को लागि गर्मी sundresses!
ब्रान्ड "अल्फ्रेड मुलर" - सफल मानिसहरूको विकल्प
के यस्तो जूता लगाउन केही संग, jackboot छ
चाँडै साधारण चिसो निको पार्न कसरी जानकारीको लागि
भित्ता शैली आन्तरिक मा: वर्णन र विशेषताहरु
Varices: लक्षण, कारण, उपचार र रोकथाम
को गर्मी मा रूस मा कहाँ आराम गर्न? Azov (रूस) को समुद्र - आराम जहाँ?